।। 'उत्सुक' को सन्जाल ।।: November 2017
विहे विन्ध्यवासिनीमा, छोरी मणिपालमा
एकजना साथीले मलाई सोध्नुभयो, "तपाईले बिहे कहाँबाट गर्नुभएको ?" मैले भनेँ, "विन्ध्यवासिनी मन्दिरबाट ।" वहाँले मलाई यसरी हेर्नुभयो कि त्यहाँबाट बिहे शायद गर्नु नै आठौँ आश्चर्य हो ।
विवाह भएको आज आठ वर्ष पूरा भएछ । यस बिचमा हामीलाई पुत्रीलाभ भयो । सोध्नुहुन्न ? "छोरी कहाँ पाएको ?" मणिपाल हस्पिटलमा ।
Posted by Utsuk at 4:34:00 PM No comments:
Labels: Picture, utsuk photography
Posted by Utsuk at 5:09:00 PM No comments:
Posted by utsuk at 5:06:00 PM No comments:
सफल शिक्षकलाई "हार्दिक बधाई"
तपाई शिक्षक हुनुहुन्छ ? पत्रपत्रिकामा फोटोसहित हार्दिक बधाई लेखाउन तपाइलाई रहर लागेको छ ? हार्दिक बधाई पाउन सफल एकजना प्रतिनिधि पात्रको कथा यहाँ प्रकाशित भएको छ । कथालाई केवल कथाको रुपमा ग्रहण गर्नुहोला, कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खान पनि सक्छ, त्यो मेरो गल्ति हैन ।
वास्तविकता यस्तो छ -
पञ्चायती कालो व्यवस्था, देशमा बसिसक्नु टिकिसक्नु छैन । घरको समस्या उस्तै, दुइ छाक टार्न पनि धौ धौ । पढ्न लेख्न त कति नै मन थियो नि, भएर के गर्नु ? जसोतसो आठ कक्षासम्म त पढेकै हो, त्यसपछि गाउँमा माध्यमिक विद्यालय थिएन, टाढा गएर पढ्न सक्ने क्षमता भएन । घरको समस्याले कहाँ जाउँ र के गरौँ भएका बेला इन्डियाबाट लाहुरे दाई टुप्लुक्क आइपुग्छन् । लाहुरका मिठा मिठा कुरा सुन्दा आज जाउँ कि भोलि जाउँ भनेजस्तो हुन्छ, नभन्दै लाउरेसँगै इन्डिया टाप कस्ने मेलोमेसो पनि जुर्छ । भर्ती हुन कोसिस पनि नगरेको हैन, भर्ती हुन लेख्या रैनछ, भाँडा माझ्न पो लेख्या रैछ ।
Posted by Utsuk at 8:49:00 PM No comments:
मैले खिचेका यी तस्विरहरू....
आजको युग सञ्चारको युग, झनै यो इन्टरनेट र पकेट गजेटले त लाइफमा चेन्ज नै ल्याईदियो । अब कुनैपनि काम गर्न व्यवसायिकता नै नचाहिने भयो । म कुनै व्यवसायिक फोटोग्राफर हैन, र पनि "मैले खिचेको" भन्नुमा गर्व गर्न मन लाग्यो यी तस्विरहरू हेर्दा । तपाईलाई चाहिँ कस्ता लागे यी, प्रतिक्रिया चाहन्छु ।
Posted by Utsuk at 4:05:00 PM No comments:
Labels: Treck, utsuk photography